Local မှ Hosting ပေါ်သို့တင်နည်းလေး ပြောကြပါဦး - MYSTERY ZILLION
Local မှ Hosting ပေါ်သို့တင်နည်းလေး ပြောကြပါဦး
December 2008 edited January 2011 in CMS
ကျွန်တော် Loacal မှာ Joomla နဲ့ Web လေး တစ်ခုလုပ်ထားတယ်ဗျ .... Local မှာ သုံးတာကတော့ Easywam နဲ့ပါ .. အဲဒီမှာ ကျွန်တော် သိချင်တာက .. Local က ဖိုင်တွေကို နက်ပေါ်ကို ဘယ်လိုတင်လဲဆိုတာလေး သိချင်လို့ပါ ... ကျွန်တော် တင်ကြည့်တော့ မရဘူးဖြစ်နေလို့ခင်ဗျာ ... ကျွန်တော် www ဖိုင်ထဲက ဟာတွေအားလုံးကို တင်လိုက်ပါတယ် ...နောက် Installiation ဖိုင် ထပ်ထည့်ထားပါတယ် .. ဘယ်လို ဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာလေးကို သင်ပေးစေလိုပါတယ် ခင်ဗျာ .. ကျွန်တော် အခု သွားတင်ထားတာတော့ 000webhost မှာပါ ခင်ဗျာ ....လုပ်ရမည့် နည်လမ်းလေးများကို သင်ကြားပေးပါ ...... ကျေးဇူးတင်ပါသည် .. :):)
ခင်မင်စွာဖြင့် ( မနောသား )
မနောသား wrote: »
ကျနော်သိသလောက်၀င်ဆွေးနွေးကြည့်မယ်။ လိုကယ်မှာရှိတဲ့ဖိုင်တွေထဲက configuration.php ဆိုတာကိုချန်ပြီးအားလုံးကို zip လုပ်လိုက်ပါ။Installiation ဖိုင် လည်းထည့်ပေးစရာမလိုပါဘူး။ပြီးရင်အဲဒီဖိုင်ကိုFTP နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သက်ဆိုင်ရာfolder ထဲကိုတင်ပေးလိုက်ပါ။အများအားဖြင့်တော့ public_htmlဆိုတဲ့folder ပဲတွေ့ရများတယ် ထင်တယ်။ပြီးရင်zipဖိုင်ကိုဖြေလိုက်ပေါ့။ database တစ်ခုဆောက်ပြီးအဲဒီထဲမှာ database user အပ်လိုက်ပါဦး။ အဲဒီမှာမှတ်ထားရမှာက database hostname၊database name၊ database usernameနဲ့password တွေပေါ့။ပြီးရင်တော့လိုကယ်မှာရှိတဲ့ database ကိုbackup လုပ်ပြီးအခုdatabase ထဲမှာ import လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ အဲဒါတွေအားလုံးပြီး သွားပြီဆိုရင်တော့ configuration.php ဆိုတဲ့ဖိုင်ထဲမှာ လိုက်ပြင်ပေးရပါတယ်။
$mosConfig_db = 'database name';
$mosConfig_host = 'database hostname';
$mosConfig_sitename = 'site name';
$mosConfig_user = 'database username';
အဲဒါတွေကိုပြင်ပေးပြီးရင်တော့ configuration.php ဖိုင်ကို upload တင်ပေးလိုက်ပါ။အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ စာရေးမကောင်းလို့ဖတ်ရတာအဆင်မပြေရင် တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။
joomla နဲ့ အစဉ်ပြေမဲ့ free hosting လေပါပြောပြပါလား....hosting လုပ်ပုံလုပ်နည်းကိုလည််အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် screen shot လေနဲ ့ရှင်းပြပေးပါလား Local မှာ install လုပ်တုန်းကလဲ ebook ထဲကကြည့့်ပြီးလိုက်လုပ်တာပါ...ကျနော်ကတအားပြိန်းပါတယ်.....MZ အစ်ကိုအစ်မများသင်ကြားပေးကြပါ...
Where do you want to host your site?
Do you have already Domain name and Web Hosting Account?
If you have webhosting account, you can upload your CMS files to your webhosting data center.
most web hosting account have public html folder( e.g; public_html or html folder).
If you use CMS system, read the documentation. Read also FAQ from your webhoster and contact their support team if you have problem with your account.
Hope this step can help youalots.
ဟို့ စတင် ( hosting ) ပေါ်ကို တင်ရင် www ထဲ က ဟာတွေ အကုန်တင်ရင် အချိန် အရမး်ကြာတယ် ခင်ဗျ .
အရင်ဆုံး ကိုယ့် ဟို့စတင်မှာ fantastico ပါလား ရှာကြည့် ပါ ( အများအားဖြင့် ပါပါတယ် ) အဲဒီ ထဲ မှာ joomla ကို ရွေးပြီး Install လုပ် .
နောက် ကိုယ့် စက်ထဲ က နေ phpmyadmin က နေ database ကို export လုပ်ပြီး
ကိုယ့် hosting ရဲ့ phpmyadmin ကို import လုပ် .
လိုအပ်တဲ့ Images တွေ files တွေကို လဲ Upload လုပ်လိုက်ရင် အားလုံး ေ၇ာက်သွားပါလိမ့်မယ် ( ကြားထဲ မှာ အဆင့်တွေ တော့ ရှိသေးတာပေါ့ )